Doorashada Afghanistan oo laga heshiiyay - BBC News Somali
Doorashada Afghanistan oo laga heshiiyay
Image caption Musharrixiinta ku tartamaya doorashada Afhganistan iyo John Kerry
Iyadoo toddoba saacadood oo uu dib u dhacay ku dhawaaqidda heshiiskan ayaa, John Kerry waxa uu lakulmay labada si heshiiska lagu dhawaaqay loo gaaro.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, John Kerry, waxa uu ku dhawaqay in Afghanistan ay dib u tirineyso dhammaan Siddeeda milyan ee cod ee la dhiibtay xilligii doorashada ku celiska ee bishii hore taas oo ay ku murmeen labada musharrax ee ku tartameyay.
Mr Kerry ayaa timaamay inuu la kulmay musharrixiinta oo kala ah Ashraf Ghani iyo Cabdullah Cabdullah, ayna isku raaceen tirinta oo ku dhici donto magaalada Kapul.
Mr Kerry, oo kula kulmay labada musharax ee kala ah, Ashraf Ghani iyo Cabdullah Cabdullah, magaalada Kapul, ayaa sheegay in hannaanka uusan noqon karin mid fudud, balse ay muhiim ahayd in is afgarad la gaaro.
Madaxweynaha xilka ka degaya Hamid Kharzai ayaa la weeydiiyey in uu dib u dhigo dhaarinta, taas oo markii hore loogu tala galay in ay dhacdo labada bisha August iyadoo musharax kasta oo guuleysta ay ka go'an tahay inuu dhiso dowladd midnima qaran.
Heshiiska ayaa aad looga shaqeeyey laba maalin oo ay socdeen wada xaajood adag ay yeesheen dhinacyada, kaas oo aad uga fogaa filashada dadka reer Afghanistan.
Waana cabiraad ah illaa iyo intee ayeey ka go'antahay siyaasadda caalamka, Milatariga iyo dhaqaale lagu xaqiijin karo in dalka Afghanistan uusan dib ugu laaban qalalaase, iyadoo tobannaan ka kun ee ciidamada shisheeyaha ah ay isku diyaarinayaan in ay isaga baxaan dalkaasi.